DAAWO SAWIRRO: RW Kheyre oo maanta booqday ciidamo tababar uga socda magaalada Baydhabo! | HalQaran.com
DAAWO SAWIRRO: RW Kheyre oo maanta booqday ciidamo tababar uga socda magaalada Baydhabo!
Baydhabo (Halqaran.com) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Khayre ayaa Isniintii maanta booqasho ugu tagay 415 Aaskar Booliis ah oo tababar uga socdo magalaada Beydhabo, loona diyaarinayo ka qayb qaadashada sare u qaadidda amniga dalka.
Mr. Kheyre oo uu wehliyo madaxweynaha dowlad gobaleedka Koonfur Galbeed Lafta-gareyn, ayaa ciidamada kula dardaarmay in ay ka faa’iideystaan, si ay ugu fududaato u adeegidda bulshada Soomaaliyeed.
Ciidamada oo Ra’iisul Wasaaruhu booqday ayaa marka ay dhammeystaan tababarka, waxaa loo qeybinayaa qayb ka ku biirta howlgallada amniga lagu sugayo iyo qayb tababar dheeraad ah la siiyo si ay ugu mid noqdaan ciidamada booliiska gaarka u tababan.
ciidamo tababar uga socda